ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းကျော်လှူခဲ့တဲ့ ဂွမ်းပုံလေး | Duwun
နောက်ထပ် အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဂွမ်းပုံလေးဟာ သင်္ကန်ကျွန်း စံပြဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေကြတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေအတွက် နောက်ထပ်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး အလှူအတန်းတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ဂွမ်းပုံလေး နဲ့အတူ နောက်ထပ် အနုပညာရှင်တွေ ပူးပေါင်းထားတဲ့ " မေတ္တာအသင်္ချေပရဟိတ" အဖွဲ့ဟာ သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံရှိ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် ငွေကျပ် ဆယ်သိန်းကျော် လှူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
"ဂွမ်းဂွမ်းတို့ အနုပညာရှင် ညီအကိုမောင်နှမတွေစုစည်းထားသည့် " မေတ္တာအသင်္ချေပရဟိတ" အဖွဲ့လေးရဲ့ ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းကို သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံ တွင် ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်များအတွက်.. တစ်ကြိမ်ဆေးရန်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းအစုံအလင်ကို အကြိမ်ရေ (၄၀) စာ ငွေကျပ်(၉၀၀၀၀၀) သိန်းတိတိဖြင့်ေဆးရုံရောက် ချို့တဲ့ နွမ်းပါးသူတို့အတွက် April.လ(1)ရက်နေ့နှင့် Aprilလ(5)ရက်နေ့.(2)ရက်စာ.ထမင်းကျွေး (၁၄၀၀၀၀) တစ်သိန်းလေးသောင်းကျပ်တိတိ။ စုစုပေါင်း ဆယ်သိန်းလေးသောင်းကျပ်တိတိ (၁၀၄၀၀၀၀)ကို ဒီနေ့ (5*4*2020)တွင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည် ... မေတ္တာအသင်္ချေပရဟိတ..အဖွဲ့၏...လှူဒါန်းမှူအစုစုကို..၈နေ့၈နံ..လူနတ်ဗြဟ္မာသတ္တဝါတို့ (ကုသိုလ်တော်)အမျှ.အမျှ.အမျှ..ထပ်တူရှိကြပါစေသောဝ်." ဆိုပြီးတော့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဂွမ်းပုံလေးဟာ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လက်မနှေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မောင်နှမအရင်းလိုခင်ရတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင်နဲ့ အတူ ဇဝနဖောင်ဒေးရှင်း ထူထောင်ပြီး ဝါရင့်သက်ကြီး လူရွှင်တော်များကို ကျန်းမာရေး ထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ဘုရား၊ တရား များများလုပ်မယ်။ ပြီးရင် ဘဝဆိုတာက လှော်တက်တွေလိုပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ အတူ ညာဘက် တက်နဲ့ လှော်လို့မရရင် ဘယ်ဘက်က တက်နဲ့လည်း လှော်ရမယ်။ လှော်တက်တွေ မရှိတော့ရင် လက်ထိုးလှော်ရမယ်ကွာ။ ပြဿနာ တစ်ခုဆိုတာလည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတာလေ။ အဲဒါကို စိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့ မလိုဘူးလို့ ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ မဂွမ်းကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် အသက်နဲ့ ခန္ဓာ တည်မြဲနေသ၍ ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသ၍ ပေးအပ်တဲ့ တာဝန်ကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမယ်လို့လည်း ကတိပေးပါတယ်” လို့ ဆက်လက် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဂွမ်းပုံလေးဟာ ရုပ်ရှင်ကို ကာလာနဲ့စတင်ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်ကတည်းက အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ၁၀ စုနှစ် တစ်စု ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိလာတဲ့ ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အိမ်အကူ ကာရိုက်တာ၊ မင်းသမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းနေရာ၊ အဒေါ်နေရာ၊ အမေ နေရာ နဲ့ အစ်မကြီး နေရာတွေမှာ အများဆုံး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု အဖြစ် "ဤအရာကိုအချစ်ဟုခေါ်သလား" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီဆု ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။